Windows XP mpampiasa kolikoly amin'ny $100 eny Windows 8 fitaovana - News Fitsipika
Windows XP mpampiasa kolikoly amin'ny $100 eny Windows 8 fitaovana
TAMIN'NY LATEST fepetra mba miezaka mafy sy handresy lahatra mba hanatsarana XP mpampiasa ny vaovao milina, Microsoft no fanatitra mpanjifa $100 eny sasany Windows 8 fitaovana raha manolotra ny XP solosaina miandry.
Ny fifanarahana nihazakazaka mandra- 15 Jona, ary tsy ampy amin'ny mpaninjara manerana ny Etazonia, Canada ary Puerto Rico. “Tolotra dia mihatra amin'ny mpanjifa izay manao fividianana an-tserasera(S) amin'ny fifanintsanana Windows XP fitaovana, na ny mpanjifa izay manolotra ny fifanintsanana Windows XP fitaovana mandritra ny fividianana(S) in-magazay ihany,” ny Redmond mafy manazava.
Na dia Microsoft Miresaka fisian'ny aterineto, izany mazava ny fomba hizaha toetra anao Windows XP manana milina ny tranonkala tsy maka izany ho fivarotana.
The $100 fihenam-bidy ihany no misy manohitra fitaovana vaovao niaritra, fara fahakeliny $599, ary ahitana ny tena toetrany takelaka analana ny tena toetrany 2. Microsoft Nanasongadina ny HP fitsiriritana Touchsmart 15 touchscreen laptop sy ny Lenovo ThinkPad S1 Yoga touchscreen solosaina findainy / takelaka mifangaro ho roa ny fitaovana afaka ny fifanarahana.
Microsoft dia mazava ho azy fa matoky tamin'ny herin'ny fifanarahana ity mba handresy lahatra XP maty-hards izay hafa rehetra tsy nahomby, tahaka ny nanoro hevitra ny mpanjifa dia voafetra ho iray fitaovana isan-.
Microsoft no namarana fanohanana rehetra noho ny 12 taona miasa rafitra avy 8 Aprily. Ny mafy Efa nampitandrina ny amin'ny fomba hatoky tena XP dia oharina amin'ny sehatra Windows vaovao, sy ny mpiara-miasa toy ny HP no efa nanoratra dokambarotra fanentanana mba hiezaka sy hamporisika orinasa mba hanatsarana.
Na dia eo aza ireo ezaka, XP Mbola be mpampiasa manerana fikambanana sy olon-tsotra, ary mazava mitoetra ao fampiasana lahatsoratra 8 Aprily. M
Ity lahatsoratra ity, Windows XP mpampiasa kolikoly amin'ny $100 eny Windows 8 fitaovana, ny mpilaza vaovao avy amin'ny The manontany ary nandefa eto nahazoana alalana.
20676	0 Kanada, nanontany, Microsoft, Microsoft tena toetrany, Microsoft Windows, Puerto Rico, Windows 8, Windows XP
← MH370 fikarohana indray toy ny hetsika ara-dalàna voalohany manomboka US vidin-tsolika hitsangana amin'ny hanenjanany ny famatsiana amin'ny key Hub →